Home / How to Get Out of Your Comfort Zone
Comfort Zone က ဘယ်လို ထွက်ကြမလဲ ???
▪️ ဘဝကြီးက နေထိုင်လှုပ်ရှားရတာ အရမ်းလွယ်ကူနေတဲ့အခါ Comfort Zone ထဲ ရောက်နေမိပြီလား ရုန်းထွက်ဖို့လိုနေပြီလား လို့ စဉ်းစားမိဖူးကြလား? အများစုကတော့ NO လို့သာ ဖြေကြမှာပါ။
▪️ ဘာလို့ဆို ကျွန်တော်တို့ အများစု က Comfort Zone ကို မရောက်ရောက်အောင် သွားချင်ကြသူ။ ရောက်နေမှန်းသိရက်ကို နေချင်ကြသူ က များသားကိုဗျ။
▪️ တကယ်တမ်းကျ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စာကျက်နေရတာ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတာ တွေမှာ အလွယ်တကူ သက်တောင့်သက်သာ ပြုလုပ်နေရတာမျိုးနဲ့ Comfort Zone ထဲ ရောက်နေတာမျိုးက မတူညီပါဘူး။ ဥပမာ - ကိုယ်က Productive ဖြစ်သူမို့ တစ်နေ့ကို အလုပ်တာဝန် ၁၀ ခု လောက် အေးဆေးလုပ်နိုင်တာမျိုးနဲ့ လေး ငါး ခုလောက်သာ လုပ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ နေနေတာမျိုး ကွဲပြားသလိုပေါ့။
▪️ဆိုတော့ ဘာလို့ Comfort Zone မှာ မနေသင့်တာလဲ?
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဒီလို အသားကျပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ အခြေအနေကနေ ကောင်းမလား ဆိုးမလား မသိတဲ့ Challenge တစ်ခုကို ဘာကြောင့် ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ မေးကြ တွေးကြမှာပါ။
▪️ Personal Growth အတွက်ပါ။ ဒီလိုမျိုး နေထိုင်တာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကျဆင်းလာမယ်။ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ ပျောက်ဆုံးလာမယ်၊ ရုတ်တရက် အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ဘာမှ အဆင်သင့်မဖြစ်ဘဲ အခက်တွေ့နိုင်မယ် စသည်ဖြင့် အခြားသော Negative Impact တွေလည်း အများအပြားရှိနိုင်ပါတယ်။
▪️ “You never change your life until you step out of your comfort zone; change begins at the end of your comfort zone.” လို့ Roy T. Bennett က ဆိုဖူးတယ်ဗျ။ ဘဝရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ Comfort Zone ကနေ ရုန်းထွက်တာကနေ စတင်တာပါပဲတဲ့။
▪️ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လက်ရှိ သက်တောင့်သက်သာ အခြေအနေကြီးကနေ ဘယ်လို ရုန်းထွက်ကြမလဲ?
🔹 ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့ ထိတွေ့ကြည့်ပါ။
အလုပ်ထွက်ပစ်လိုက်တာတို့ ကျောင်းပြောင်းလိုက်တာတို့လို့ ကြီးကြီးမားမားတွေကနေစတင်ဖို့တော့ အကြံမပြုလိုပါဘူး။ သောက်နေကျ ကော်ဖီ အမျိုးအစားကနေ တခြား Drink တစ်ခုကို ပြောင်းသောက်လိုက်တာမျိုး၊ ကိုယ်မဖတ်ဘူးတဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစား ရှာဖတ်ကြည့်တာ၊ ကိုယ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုကို စာတွေ့လက်တွေ့ လေ့လာလိုက်စားကြည့်တာကနေစလို့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် အပြုအမူ အကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို တစတစ ပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စိတ်သစ် လူသစ် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ရဲ့ ခံစားချက်ကို စတင် မြည်းစမ်းနိုင်မှာပါ။
🔹 ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ရွေးချယ်တတ်ပါစေ။
Comfort Zone ထဲ ရောက်နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ကြောင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လူ့သဘောသဘာဝအရ ပြဿနာများမယ့် လမ်းထဲ သက်သာတဲ့ လမ်းကို ရွေးလျှောက်ချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီပုံစံနဲ့ ဒီစာကို ကျက် ဆို ဒီတိုင်း အလွတ်ကျက်တယ်၊ ဒီ အလုပ်ကို ဒီလိုပဲ လုပ်ရတယ်ဆိုရင် တခြားဘာနည်းလဲ ရှိလဲ မသိချင်ကြတော့တာ များပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က Comfort Zone ကြီးက ရုန်းထွက်မယ် စဉ်းစားထားလိုက်ရင်တော့ ဘယ်လို နေရာမျိုးမှာမဆို စိတ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ခက်ခဲတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ တွန်းအားပေးတတ်ပါစေ။
🔹 တစ်နေ့တာအချိန်ဇယားကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။
ကျောင်းက အလုပ်က ပြန်လာတဲ့အချိန်ကနေ စလို့ အိပ်ရာဝင်ခါနီးအထိ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတတ်လဲ?
ပိတ်ရက်တွေမှာရော ကိုယ်က ဘာတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတတ်လဲ ပြန်လည် စိစစ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ ကိုယ်က ဂိမ်းဆော့ ရုပ်ရှင်ကြည့် နေတတ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အလုပ်လုပ် စာကျက် လိုက်တာမျိုး ဒါမှ မဟုတ် ဟင်းချက်နည်းတစ်ခုခု စမ်းသပ်ကြည့်တာမျိုး၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးပဲ လုပ်ကြည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့် နေ့စဉ်အချိန်ဇယားကို ကိုယ် ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေမျိုးမဟုတ်ဘဲ အကျိုးရှိစေမယ့် အလုပ်တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းက Comfort Zone ကနေ ထွက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသောလမ်းစပါပဲ။
🔹 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခိုင်းတတ်ပါစေ။
Comfort Zone မှာ ရောက်နေသူတွေရဲ့ အခြေခံ အချက်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညှာတာ သနားနေခြင်းပါပဲ။ ပင်ပန်းမှာစိုးတယ်၊ စိတ်ညစ်မှာစိုးတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း Self Love ဆိုတာမျိုးက Personal Growth ကို တတ်နိုင်သလောက် လေ့ကျင့် နေတာမျိုးပါ။ ဆိုတော့ စာ နှစ်နာရီ ပုံမှန်ကျက်တယ်၊ တစ်နာရီလောက် သင်္ချာတွေ ထပ်တွက်လိုက် ပို effective ဖြစ်မသွားလေဘူးလား။ အလုပ်တွေ အရမ်းကြီ မရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Project အသစ်တွေကို လေ့လာရင်း စမ်းလုပ်ကြည့်တာမျိုးကရော ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလား၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးအမြတ် အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရလာနိုင်မလဲ တွေးကြည့်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ရင် Comfort Zone ထဲ မရောက်လေအောင် ခိုင်းတတ်ပါ။
🔹 Comfort Zone ကို ချဲ့ပါ။
Comfort Zone ကနေရုန်းထွက်ဖို့ တွေးမိကြတဲ့အခါ လူအချို့က ဘဝနေထိုင်မှုကြီးလုံး၀ ပြောင်းပြန်ကြီး ပြောင်းလဲ ရမလို ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Comfort Zone ကို ချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဆိုကြပါတော့ ကိုယ်က Level 1 မှာနေရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေတာထက် စာရင် Level 10 ရောက်အောင်ကြိူးစားပြီး Comfortable ဖြစ်ဖြစ်နေလိုက်လို့ မရပေဘူးလား။
▪️ ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ မအောင်မြင် မရရှိဖူးခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အိပ်မက်တွေ ရလာ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆို ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ မပြင်ဆင် မလုပ်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ကြိုးစားမှုမျိုးကိုတော့ ရှိရပါမယ်တဲ့။
▪️ ဒီတော့ အပြောင်းအလဲ တွေနဲ့ အသစ်သစ်သော ပန်းတိုင်တွေဆီ အရောက်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ သက်တောင့်သက်သာ မရှိလဲ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ရော Comfort Zone က ရုန်းထွက် ပြီးပြီးလား?